Imbongi yaseMpophomeni ichaza kabanzi ngempilo yayo | News24
Imbongi yaseMpophomeni ichaza kabanzi ngempilo yayo
IMBONGI yaseMpophomeni uSiyabonga Mpungose uthi zonke izinkondlo azibhalayo usuke ehlose ngazo ukukhuthaza nokuqwashisa intsha ukuthi ingazibandakanyi ezintweni ezingalungile.
Engxoxweni ekhethekile ne-Echo uMpungose uthe inkondlo yakhe yokuqala wayibhala efunda u-Grade 10.
Uthe lokhu wakwenza ngemuva kokuba uthisha wayebajezise ngokuthi babhale izinkondlo eziyi-8 abazisusela ekhanda kanye nezindaba ezimfishane ezimbili ezingamakhasi ayi-8.
Uthe lesijeziso basithola ngemuva kokuba bengawubhalanga umsebenzi abebewunikeziwe wokuthi babhale i-CV kwaze kwashaya isikhathi sokuthi uthisha awuqoqe.
“Uthisha wasinikeza izinsuku eziyi-13 ukuthi sibhale lezi zinkondlo kanye nezindaba ezimfishane bese siyazibhala nge-computer sizilethe kuyena.
“Ngaleso sikhathi ngangingazinokuthi ibhalwa kanjani inkondlo ngingazi nokuthi uma ngithi ngiyaqala ngizoqalaphi. Ngesikhathi kusondele usuku lokuthi sihambise izinkondlo kuthisha ngangingabhalile lutho. Ngathi ngibuke uhlelo luka-Zola 7 kumabonakude ngezwa esho amazwi athi I was born in hunger and anger ngabe sengidonsa ipeni nephepha ngabhala phansi lokho. Kwathi sekungena olunye uhlelo futhi ngaphinde ngacosha okunye ngahlanganisa kwabe sekuzifikela, kwaba ukuqala kwami lokho. Inkondlo yami yokuqala yayisihloko esithi I was born in hunger and anger,” kuchaza yena.
Uthe ukuqala kwakhe ukuduma ingesikhathi ehaya inkondlo emngcwabeni womunye umfundi ayefunda naye. Uthe kwakumele afike akhulumele abafundi kodwa wayengazi ukuthi uzothini.
“Ngavele ngafike ngama phambili ngatshela abantu ukuthi angazi ukuthi ngizothini ngavele ngahaya inkondlo. Abazali bami babengazi nokuthi ngenza izinkondlo bezwa ngabantu ababesemngcwabeni ababengawuvali umlomo. Kusukela lapho angiphindanga ngabheka emuva kwaze kwaba unyaka ka-2010 nalapho ngagcina sengihlabana khona ngethuba lokuthi ngisho izinkondlo zami emsakazweni Ukhozi FM njalo ngoLwesihlanu ngo-10.45 am.
“Ukuthola kwami leli thuba kwalandela emva kokuba ngangenela umncintiswano wezimbongi owawuse-City Royal Hotel nalapho kwakuwinwa khona imali engu-R10 000. Ngafika okokuqala ngadlulela emzuliswaneni olandelayo kwaze kwaba ngiyawunqoba. Ngabe sengithola ucingo kumdidiyeli wezinhlelo zohlelo uJabul’Ujule lukamama uDudu Khoza bethi bangathanda ukuthi ngizohaya ezinye zezinkondlo zami emoyeni.
“Ngokwazi kwami kwakuzoba into yosuku olulodwa kodwa ngesonto elilandelayo baphinda bangifonela bangitshela ukuthi angibuye ngesonto elilandelayo. Kusuka lapho akukaze kwama baqala bangisayinisa izinkontileka kuze kube yimanje ngisazihaya izinkondlo.
“Zonke izinkondlo zami engizibhalayo ngisuke ngiqwashisa futhi ngifundisa abantu abasha ngezinto ezenzekayo ezweni. Into engifuna abantu abasha bayazi, ikakhulukazi izimbongi, ukuthi kumele ube wuwe ungazami ukulingisa omunye umuntu uma uhaya inkondlo yakho, ngoba ngesikhathi wenza njalo abantu bazocabanga lo muntu omlingisayo bese bekhohlwa uwena nenkondlo yakho.”
UMpungose uphinde waveza ukuthi selokhu aqala ukwenza izinkondlo nokungenela imincintiswano yezinkondlo akakaze aphume isibili, uhlezi ephuma phambili.